VONO OLONA TANY MOROMBE : Ahiana hiitatra lavitra ny adin’ireo fianakaviana
Vokatry ny adin’ny samy mpividy omby roa lahy, izay nitarika vono olona tao fokontany iray ao amin’ny Kaominina ambanivohitra Antanimeva, any amin’iny Distrikan’i Morombe iny dia niteraka tsy vitoviana fomba fijerin’ny fianakavian’ny andaniny sy ny ankilany. 13 juin 2012
Manahy mafy ny hitaran’ny ady eo amin’ny fianakaviana roa tonta noho izany ny tompon’andraikitra any an-toerana.
Ny zoma lasa teo no raikitra ny adin’ireo mpividy omby roa lahy tao amin’ny fokontany Antanimeva. Araka ny loharanom-baovao dia ny iray avy any Ambahikily ary ny iray kosa avy any Ampahavily. Samy tompon’ny vola izy ireo ka dia tsy nisy nanaiky ho voatsindry na.
Tsy nahatanty anefa ny lehilahy iray avy any Ambahikily, ka nalainy ny basiny ary notifiriny ity mpifanandrina aminy ka maty. Nentin’ny zanany lahy nitsoaka izy taorin’izany ka na dia nanao ny fikarohana aza ny mpitandro ny filaminana eo anivon’ny Zandary any an-toerana dia tsy nahita azy.
Olona sendra nanatrika ny fifamaliana kosa no nilaza tany amin’ny tobin’ny Aandary ny androtr’io ihany fa nitsoaka any Befandriana Atsimo izy ireo. Raha vao nahazo ilay fampandrenesana ny mpitandro ny filaminana dia nakany Befandriana Atsimo ka tratra tao izy mianaka. Notazomin’ny Zandary avy hatrany izy ireo noho io vono olona io.
Tsy nanaiky mora kosa anefa ny fianakavian’ilay namoy ny ainy izay avy any Ampahavily fa mihevitra ny hamaly faty. Niaro izany fatratra kosa anefa ny mpitandro ny filaminana ka eo teo no niteraka ny olana.
Efa nandray ny andraikitra
Manoloana izany dia tsy nipetra-potsiny fa nandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana any Toliara, toy ny Mpampanoa Lalàna, ny lehiben’ny tobim-paritry ny Zandary, lehiben’ny Polisim-pirenena ka niezaka ny tsy hisian’izany ady eo amin’ny fianakavian’ny andaniny sy ny ankilany.
Manao antso avo ny mponina, araka izany, izy ireo mba tsy hisendaotra manolona ny zava-nitranga ny zoma lasa teo. Efa mandray ny andraikiny ny mpitandro ny filaminana ary ny Fitsarana any an-toerana amin’ny fanomezana sazy faran’izay henjana ity namono olona ity. Noho izany dia tokony ho tony hatrany ny mponina any an-toerana.